How to Register for Turnover - isiZulu
SARS Home > Types of Tax > Turnover Tax > How to Register > How to Register for Turnover - isiZulu
​UYIBHALISA KANJANI INTELA YeNZUZOMTHAMO
Uyibhalisa kanjani Intela Yenzuzomthamo (Turnover)?
Mawenze uhlolo olusheshayo ukuzibona ukuthi ufanelekile ukuthela intela yenzuzomthamo
Uma ufanelekile, gcwalisa ifomu i-TT01:
TT01 - Application for Turnover Tax form (Ukugcwalisa siqu)
TT01 - Application for Turnover Tax form (Ukugcwalisa bunyazi)
Isungqangi: Kungakhathelekile ukuthi i-TT01 igcwaliswe siqu noma bunyazi, kuzodingeka uyishicilele uyise egatsheni lakwa-SARS.
Ngingalitholaphi ifomu lokuzibhalisa?
Leli fomu lesicelo liyatholakala lapha:
Kuleli khasi lewebhu.
Ku-Contact Centre yakwa-SARS ku- 0800 00 SARS (7277) kumbe
Isicelo sokubhalisa kufanele silethwe nini?
Kufanele sithunyelwe andukuba kuqa;e unyaka wokubuyekeza (Unyaka wokubuyekeza uqala kusekal zingu-1 kuNdasa kuya ku-28 kuNhlolanja), kumbe ngosuku olunye njengokunqunywa nguKhomishana kwiSaziso SikaHulumeni.
Isikhathi siyahluka kancane ekubhaliseni okusha kanye nokwamabhizinisi asevele ebhalisile.
Amabhizinisi amasha: Uma kuba nebhizinisi elisha eliqale ukuhweba maphakathi nonyaka wokubuyekeza futhi lifisa ukuzibhalisela intela yenzuzomthamo, isicelo kufanele sithunyelwe ezinyangeni ezimbili kusuka osukwini ibhizinisi elaqala ngalo ukuhweba.
Amabhizinisi ahwebayo vele: amabhizinisi asebenzayo angazibhalisela kumbe angaguqukela kwintela yenzuzomthamo andukuba kuqale unyaka wentela omusha.
Ungahambisa ifomu eligcwalisiwe egatsheni lakwa-SARS elibuduze nawe kumbe ulithumele ngeposi kuleli kheli:
SARS Revenue Branch Office
U-SARS uzokuthumelela incwadi emayelana nemiphumela yesicelo sakho. Uma ifomu le-TT01 olilethile lingaphelele, njengomkhokhintela uyokwaziswa futhi isicelo siyocutshungulwa futhi uma sekuhlinzekwe yonke imininingwane.
Kusebenza kanjani ukuzikhipha kwababhalisiwe?
Ukuzikhipha ngokuzikhethela: Umuntu angaqoka ukuzikhipha ungakaqali unyaka wokubuyekeza kumbe ngosuku olunye oluyukumenyezelwa nguKhomishana kuSaziso SikaHulumeni. Ukuphuma kuyokuba semthethweni kusuka ngosuku lokuqala lonyaka wokubuyekeza.
Ukuzikhipha okuphoqelekile: Kungenzeka uphoqelelwe ukuba uphume uma inzuzomthamo yevile ku-R1 milllion kulowo nyaka wentela kumbe kukhona okuyisimiso sokufaneleka ongasenakho (isigaba 3 seSheduli Lesithupha). Esimweni sokuphuma okuphoqiwe, ibhizinisi lizokhishwa kusukela ekuqaleni kwenyanga elandela inyanga ongasafanelekile ngayo ukuba senteleni yenzuzomthamo.
Isungqangi: Uma umuntu esekhishiwe (ngokuzikhethela) kwintela yenzuzomthamo, angeke besabhaliswa njengebhizinisi elincane futhi.
Uligcwelisa kanjani ifomu i-TT01?
Uma uvula ifomu lesicelo i-TT01, kuzodingeka ukuba ugcwalise Isivivinyo Esisheshayo andukuba ifomu liqhubeke livuleke.
Uma impendulo yomunye wemibuzo yeSivivinyo Esisheshayo ingu-“cha”, ibhizinisi angeke lifaneleke ukungena kwiNtela Yenzuzomthamo.
Uma Isivivinyo Esisheshayo singakaphothulwa ngokufanele kuzovela lo myalezo okhomba iphutha:
Uma ususiphothulile Isivivinyo Esisheshayo cindezela ku- “Create Form” kuzokube sekuvela lo myalezo olandelayo:
Veza ukuthi ingabe umfakisicelo uhweba njenga-:
Sole proprietor (Ungayedwana)
Ngokuqhwiza ibhokisi elifanelekile
Ukwehluleka ukuqhwiza elinye lamabhokisi kuyoholela ekuchithweni kwesicelo sakho.
Lolu lusuku okwasungulwa ngalo ibhizinisi lelo. Sicela uqiniseke ukuba ekufakeni usuku ulandela uhlelo lo-NYKNYAGSK isib. 20020601 kumabhizinisi aqale ukuhweba kusuka zingu- 01 kuNhlangulana 2002.
Leli gama lebhizinisi elibhaliswe ngokusemthethweni esikhungweni esigunyaziwe isib.
Lesi yisigaba esiphoqelekile uma uqhwize ibhokisi lokuba yi- close corporation, umfelandawonye kumbe yinkpamani phezulu efomini.
Leli ligama ibhizinisi elihweba ngaphansi kwalo kumbe elaziwa ngalo kumakhasimende alo.
Lena yinombolo yokubhaliswa etholwa yibhizinisi kwabakwa-SARS uma selibhaliselwe ukuthela Intelangeniso.
Inombolonkomba yeNhlawulo-Nganzuzo (PAYE)
Lena inombolo yokubhaliswa etholwa yibhizinisi kwabakwa-SARS uma lizibhalisela ukuthela i-PAYE.
Inombolo yeNtelantengo (VAT)
Lena inombolo yokubhaliswa etholwa yibhizinisi kwabakwa-SARS uma lizibhalisela ukuthela i-VAT.
Inombolo yokubhaliswa kwa-CIPC
Lena yokubhaliswa etholwa yi-close corporation, ngumfelandawonye kumbe inkampani uma lizibhalisa kwa-CIPC (Umnyango WezoHwebo NeziMboni).
Ikhodi yomthombamali yengenisomali elimqoka
Lena ikhodi eyakhelwe imboni ngqo kwezomnotho isib. Kwezokukhiqiza, okuvela kuyo ingenisomali elisemqoka. Amakhodi ezimboni ezahlukene angatholakala kwiSishayelelo A esingezansi
Leli yikheli lesakhiwo sebhizinisi okungukuthi isakhiwo lapho ibhizinisi elihwebela kuso.
Uma ibhizinisi lihwebela eflethini noma kwithanawozi, kufanele kuhlinzekwe ngenombolo yeyunithi ifakwe ngaphansi kwekhethelo elithi “unit no”
Igama lebhuloho kumbe lebhuloho lesakhiwo samaflethi kumbe sethanawozi kuthi lapho ibhizinisi lingahwebeli eflethini noma kwithanawozi lesi sikhala usishiya singenalutho.
Igama lesitaladi/ lepulazi
Leli yikheli ibhizinisi elithanda ukwamukelwa kulo iposi elithunyelwe. Kungenzeka lifane nekheli lebhizini elingenhla kumbe libe inombolo yebhokisi laseposini noma elinye-ke nje ikheli. Umal lifana nekheli lebhizinisi vele uqhwize ebhokisini elifanele ngo-“X”.
Uma impendulo kungu- “Cha”, kuzovela lezi zikhala ezilandelayo futhi uzokwazi ukuzilungisa:
Isikhungo Sokuposa kumbe i-Sub-unit (uma ikhona) (isib. Postnet Suite ID)
I-PO Box: veza ebhokisini elifanele uma ikheli lokuposa kuyi- ‘P.O. Box’ kumbe ‘Private Bag’
I-Private Bag: veza ebhokisini elifanele uma ikheli lokuposa liyi-‘P.O. Box’ kumbe ‘Private Bag’
Amanye amakhethelo okuposa angama- PO Special Service (ligagule)
Isidaluli Sekheli lokuposa esibhalisiwe
Lena yimininingwane ye-akhawunti yasebhange ezosetshenizwa yibhizinis.
Qaphela: Lezi zigaba ezilandelayo kufanele zigcwaliswe uma usuqoke Igama Lebhange.
Inombolo yegatsha: Uma ‘Igama Lebhange’ inekhodi elingujikelele,lesi sigaba sizokuvaleka bese yonke imininingwane yobujikelel izingenela, kungenjalo lesi sikhala sizokuvumela ukuba ulungise futhi kufanele uyigcwalise.
Igama Legatsha: Uma ‘Igama Lebhange’ inekhodi elingujikelele,lesi sigaba sizokuvaleka bese yonke imininingwane yobujikele izingenela, kungenjalo lesi sikhala sizokuvumela ukuba ulungise futhi kufanele uyigcwalise.
Uhlobo lwe-akhawunti – Qoka u-Cheque noma u- Savings/Transmission
Igama Lomnini-akhawunt Igama le-akhawunti njengobhaliswa kwayo ebhange) – Igama Lebhange: Cindezela uphawu luka + ukuze uthole uhlu lwamagama amabhange bese uyaqoka. Cindezela u-“OK” ukuze uqhubeke.
Imininingwane Yomhwebi ngayedwana/Omdibi ofake isicelo/Umsebenzeli Womphakathi
Kudingeka le mininingwane elandelayo:
Ubuhwebi ngawedwana: Imininingwane yalobo buhwebi ngawedwana kumbe ngomuntu uqobo.
Ubudlandawonye: Imininingwane yomdibi ofake isicelo seNtela Yenzuzomthamo. Lapho bebabili abafake isicelo seNtela Yenzuzomthamo ngamunye mabagcwalise ifomu lesicelo elizimele.
I-Close Corporation: Imininingwane yobambe isikhundla somphakathi kuleyo close corporation.
Inkampani: Imininingwane yobambe isikhundla somphakathi kuleyo nkampani.
Umfelandawonye: Imininingwane yobambe isikhundla somphakathi kuloyo mfelandawonye.
Inombolonkomba yeNtelangeniso kanye nosuku lokuqashwa kwabantu ababalwe lapha kufanele kulethwe ndawonye.
Zonke izikhala zalesi sigaba ziyimpoqo. Nokho-ke, umfakisicelo angasihlinzeka ngenombolo yakhe kaMazisi/yePhasiphothi okungukuthi kawudingi ukuletha kokubili. Kufanele alethe futhi nenombolo yocingo eyodwa.
Lapho bebabili nangaphezulu abaMdibi/Amalangu/ABaninimasheya kufanele bagcwalise lezi zikhala ngamunye kubona:
Inombolo Yocingo yebhizinisi
Usuku lokuzalwa (CCYYMMDD)
Izwe elikhiphe iPhasiphothi (isib. iNingizimu Afrika = ZAF)
Usuku lokuqokwa (CCYYMMDD)
Inombolo kaMakhalekhukhwini, kanye
Imininingwane yabathathu abamdibi/abangamalungu/abaninimasheya
Lapho kunabamdibi/amalungu/abaninimasheya ababili noma ngaphezulu kufanele bagcwalise isibalo sabamdibi/samalungu/sabaninimasheya.
Makugcwalise le miningwane yalabo abamdibi/abangamalungu/abangabaninimasheya
Izwe elikhiphe leyo phasiphothi (isib. iNingizimu Afrika = ZAF)
Uma uzama ukugaya ifomu le-TT01 ngaphandle kokugcwalisa izikhala eziyimpoqo kuzovela umyalezwana othushukayo:
Uma ifomu lingezukulethwa ngokushesha ngenxa yokungabaza maqondana nemininingwane eyisidingo kumbe ngoba kunesidingo sokuqala phansi ukufaka imininingwane efomini; la makhethelo alandelayo ayatholakala:
Uma yonke imininingwane isigcwalisiwe umfakisicelo kulindeleke ukuba agcwalise, ashicilele bese esayina ikhasi lokuqala. Ukwehluleka ukwenza njalo kuzoholela ekutheni isicelo sichithwe.
Ifomu lesicelo i- TT01 eligcwalisiwe kufanele lilethwe kwa-SARS ebhokisini lokwamukela egatsheni lakwa-SARS.
Ikhethelo le-eFiling kalikabi khona ekulethweni kwefomu lesicelo i-TT01.
Last Updated: 12/04/2018 11:31 AM ​